Vavaka hanoherana ny fialonana sy ny fialonana FIVAVAHANA VAVAKA
Home vavaka Vavaka hanoherana ny fialonana sy ny fialonana
Vavaka hanoherana ny fialonana sy ny fialonana
Ao amin'ny lahatsoratra anio dia hanao vavaka isika hanoherana ny fialonana sy ny fialonana. Ny fialonana sy ny fialonana dia fanahin'ny devoly roa. Toy ny zanaky ny mazava mampiseho ny vokatry ny fanahy, dia toy izany koa, ny zanaky ny maizina dia maneho ny fanomezany. Na izany aza, tsy midika ara-bakiteny hoe izay rehetra saro-piaro na mialona ny hafa dia azon'ny demonia. Indraindray, dia mety ho famantarana sasany amin'ny fanodikodinana ratsy eo amin'ny fiainan'ny Kristiana.
Ny iray amin'ireo maharatsy ny fialonana sy ny fialonana dia ny manakana ireo izay ananan'ny tenany tsy handroso amin'ny fiainana. Izany dia satria izy ireo dia hihazakazaka foana amin'ny fotoana sy ny zava-bitan'olon-kafa. Mandritra izany fotoana izany dia samy hafa ny anjaran'ny olona tsirairay, toy izany koa ny fotoam-panehoantsika dia tsy hitovy velively. Ny olona izay saro-piaro amin'ny fahombiazan'ny olona iray na amin'ny fanomezana azy dia ho sosotra amin'ny fiezahana hitovy amin'ilay olona itiavany azy ary rehefa miharihary fa tsy ho tonga tahaka an'io olona io mihitsy izy dia raikitra ny hatezerana sy ny fankahalana
Amin'ity dingana ity dia tsy mahazatra intsony io satria ny hatezerana sy ny fankahalana dia mety hahatonga ny olona hanao zavatra tena ratsy amin'ny olona iray hafa. Ny fialonana sy ny fialonana dia tsy zavatra iray tokony hananana fahamalinana. Ny vokatra mampidi-doza hafa amin'ny fialonana dia ny hanakanana ny olona iray tsy hahita ny fanehoana ny fikasan'Andriamanitra ho an'ny fiainany satria sahirana izy ireo manara-maso ny fiainan'ny hafa. Ny olona toy izany dia tsy hanana fotoana hanohizany ny nofinofiny sy hahatratrarany ny tanjony amin'ny fiainana.
Na dia mieritreritra aza ny olona toy izany dia hanjavona tsotra izao ny fialonana sy ny fialonana rehefa nahatratra ny zavatra rehetra vitan'ny olona iray masiaka azy, vao ho hitan'izy ireo fa tsy mahafa-po ny fanahy. Na dia tompony izao tontolo izao aza dia hialona olona iray izay mbola miady kely ihany izy. Ny toe-tsaina feno fialonana sy fialonana dia fanahy ratsy mila zahana tokoa.
Ny fialonana no nahatonga an'i Kaina hamono an'i Abela, ary izany dia nahatonga Andriamanitra hamono an'i Kaina sy ny taranany rehetra. Ny fialonana sy ny fialonana no nahatonga ny rahalahin'i Josefa hamidy ho andevo. Saro-piaro izy ireo satria ny dadany no tian'i Josefa kokoa noho ny ambiny, dia nialona azy izy ireo satria raha ny nofinofy momba ny fahalehibiazana, ny lolompo, ny hatezerana ary ny fankahalana dia nahatonga azy ireo hivarotra azy ho andevo. Nanjary nalahelo ny fiafaran'ny tantaran'izy ireo satria niondrika izy ireo nony farany nefa tsy fantany hoe i Josefa rahalahin'izy ireo.
Azonao atao ny mahita ny fanahin'ny fialonana sy ny fialonana mametra ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona. Raha nialona an'i Esao i Jakôba satria i Esao no voalohany nahomby na dia teo aza i Jakôba nangalatra ny tso-drain'izy ireo tamin'i Esao. Mety ho sahirana loatra i Jakôba tamin'ny fanaraha-maso ny fiainan'i Esao ka hadinony fa misy olana eo amin'ny fiainany manokana mila ny fihaonan'Andriamanitra.
Halan'Andriamanitra ny fialonana satria rehefa saro-piaro isika amin'ny fitahian'ny hafa na fanomezana dia toy ny milaza amin'Andriamanitra isika fa tsy nanao zavatra tsara ho antsika Izy. Mandritra izany fotoana izany dia tsy tokony hifantoka amin'ireo zavatra marobe izay nitahian'Andriamanitra antsika isika raha mbola sahirana manenjika ny aloky ny zavatra kely mbola ho azontsika.
Isaky ny mahatsapa karazana fahatsapana mampifangaro ny fialonana sy ny fialonana ianao dia tsara kokoa raha manafika azy ianao amin'ny vavaka alohan'ny hidirany ho demony lehibe kokoa. Ity ambany ity ny vavaka mahery atao hanoherana ny fialonana sy ny fialonana.
Ry Andriamanitra Andriamanitra ô, tonga eto anatrehanao anio aho hampahafantatra anao ny fanaintainana izay notsotroiko indraindray. Mahatsiaro mangidy izaitsizy aho rehefa mahita olon-kafa mahomby mihoatra ny ahy, mitsiriritra aho rehefa mihomehy ny hafa. Ary fantatro tsara fa mifanohitra amin'ny teninao ao amin'ny bokin'ny Romana 12:15 ny hifaliantsika miaraka amin'ireo mifaly. Ny fahasarotam-piaro ao am-poko dia mirehitra mafy ka tampoka dia lasa nankahala izay olona mahomby aho. Ray ô, mivavaka aho mba hanampianao ahy hanala ny fon'ny fialonana sy ny fialonana amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Jesosy Tompo ô, efa nitory ianao fa tokony hifankatia toy ny nitiavan-drainay anay. Azonao fa ny fitiavana no fanasitranana ny aretina rehetra eto amin'izao tontolo izao. Ray ô, mangataka aho fa tsy ny fialonana sy ny fialonana no hamoronana fo feno fitiavana ao anatiko amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray any an-danitra, voasoratra fa ny hazo rehetra izay tsy nambolen'ny raiko dia hongotana. Ry Tompo Andriamanitra ô, fantatro fa tsy nanisy fialonana velom-pialonana sy fitsiriritana tamiko mihitsy ianao. Omeko anao tanteraka ny fiainako sy ny fiainako, fa handrava ny asan'ny devoly amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Ray Tompo ô, mangataka aminao aho fa hanome ahy fo feno fankasitrahana izay hahatonga ahy ho feno fiononako. Ry Jesosy Tompo ô, mangataka aminao aho mba hanomeo fahasoavana aho mba ho voky ny zavatra tsara nataonao ho ahy, ary manantena ireo zavatra lehibe kokoa mbola hataonao. Tompo ô, mangataka famelankeloka aminao aho noho ny fialonana sy ny fialonako anao satria toa tsy mbola nisy zavatra tsara nataonao tamiko izany. Tompo ô, mitady ny famelankelokao aho, mamela ny helokao ny Tompo, amin'ny ra sarobidy izay nalatsakao teo amin'ny hazo fijalian'i Kalvary hanadio ny fahotako amin'ny anaran'i Jesosy.
Jesosy Tompo ô, mivavaka aho mba homenao ahy ny fahasoavana hahita ny fitenenana amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatro fa manana ny fanomezana tsara indrindra avy aminao aho, fantatro fa manana ny fitahiana tsara indrindra avy aminao aho, Jesosy Tompo. Omeo ahy ny fahasoavana tsy maniry hoe olon-kafa aho, fantatro fa izaho no kinova farany tsara indrindra ho ahy, omeo ahy ny fahasoavana hirehareha amin'izany foana amin'ny anaran'i Jesosy.
Manohitra ny fanahy mangidy sy tezitra rehetra aho isaky ny mahita olona mivoatra, dia mamono fanahy toy izany amin'ny anaran'i Jesosy aho. Manomboka izao dia manomboka mampiseho ny vokatry ny fanahy aho amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraVavaka hanoherana ny nofy ratsy mandritra ny fitondrana vohoka
Next lahatsoratraVavaka hanoherana ny fandotoana nofy
Ana Sousa 22 jona 2021 Amin'ny 2:29 hariva
Diso ireo vavaka ireo. Matetika ireo izay sahirana na tsy mahomby dia satria ny hafa saro-piaro amin'ny toetrany ary manakana azy ireo hanakana anao. Saro-piaro izy ireo.
Tao anaty lavaka i Joseph fa izy kosa no nialona satria tena izy ary sandoka sy fialonana ireo rahalahiny.
5 Zavatra mety hanakana an'Andriamanitra tsy hamaly vavaka
Teboka vavaka hamitana tanjona amin'ny 2021
Torohevitra mivavaka am-pahavoazana hamotehana ireo cauldrons ratsy (Pots).